गीतकारद्धय डा. विष्णु रजनी र नवराज पोखरेल सुनमनको आधुनिक गीत तथा गजल संग्रह ''मधुरता'' एक भव्य कार्यक्रमविच सार्वजनिक गरिएको छ । - Glamorous Icon
२३ बैशाख २०७३, बिहीबार ०१:१४
Home›GIcon News›गीतकारद्धय डा. विष्णु रजनी र नवराज पोखरेल सुनमनको आधुनिक गीत तथा गजल संग्रह ”मधुरता” एक भव्य कार्यक्रमविच सार्वजनिक गरिएको छ ।
गीतकारद्धय डा. विष्णु रजनी र नवराज पोखरेल सुनमनको आधुनिक गीत तथा गजल संग्रह ”मधुरता” एक भव्य कार्यक्रमविच सार्वजनिक गरिएको छ । युनियन हाउसमा भएको कार्यक्रममा गीतकार कालीप्रसाद रिजाल, संविधानविद् एवम् सङ्गीतकार भीमार्जुन आचार्यको हातबाट उक्त एल्बम विमोचन गरिएको हो । सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत रहेको सो एल्बममा अन्जु पन्त, मनोजराज सिवाकोटी, युवराज चौलागाँई, शिव परियार, निशा देशार, भविन ढुंगाना लगायतका गायक-गायिकाले स्वर दिएका छन् । विभिन्न छ वटा गीत समावेश सो एल्बमलाई रेकडिङ्ग तथा मिक्सिङ भोला पौडेलले र मास्टरिङ प्रदिप कुमार उपाध्यायले गरेका छन् भने एरेन्जमेन्ट सुदिप सागरको रहेको छ ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको शुभकामना सहितको भिडियो सन्देश देखाईएको थियो । स्वास्थ्यका कारण उहाँ भने कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएन । भिडियो सन्देशमा उहाँले यो एल्बममा समावेश गीतको लेखन शैलिको तारिफ गर्नुभएको थिए । कार्यक्रममा गीतकार कालीप्रसाद रिजाल तथा संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले एल्बममाथि समीक्षा गर्दै सफलताको शुभकामना व्यत्त गरेका थिए ।
यस एल्बमका गीतकारमध्येका एक डा. विष्णु रजनी हाल अमेरिकामा छन् । उक्त कार्यक्रममा भिडियो सन्देश छोेड्दै उनले आफ्नो आमाबुबाले आफुलाई सधै सहयोग र संस्कार दिएकोमा आभार प्रकट गरेका छन् । त्यसैगरि अर्का गीतकार नवराज पोखरेलले विष्णु सानैदेखिको साथी भएको र एक अर्काको भावना मिल्ने भएकोले केही गरौ भन्ने हेतुले यो एल्बमको सृजना गरेको बताए । विभिन्न समाजसेवी, बुद्धिजिवी, प्रवुद्ध व्यक्ति, गायक-गायीका एवं पत्रकारको उपस्थिती रहेको उक्त कार्यक्रममा गायक भविन ढुंगाना र गायीका निशा देसारले उक्त एल्बममा समावेश गीतहरु गाएका थिए ।
मिस्टर ग्लोबलको टप १० मा दिक्पाल, छैटौं ...
युट्युबबाट ‘कथा काठमाण्डु’को ट्रेलर हटाउन बोर्डको निर्देशन